Olon-tsotra iray no nampahafantatra ny polisy fa nisy lehilahy iray nanolana vehivavy tetsy Fanambinana ( Ambohimanarina) . Tsy niandry ela ny polisy fa avy dia nidina teny an-toerana nijery ilay vehivavy voaolana. Nilaza ity farany fa mbola tsy lasa lavitra ilay lehilahy nanolana azy fa mbola afaka samborina tsara. Rehefa niaraka nitady ilay mpanolana ny polisy sy ilay vehivavy dia hita tao amina kirihitr’ala tsy lavitra teo amin'ilay toerana nitrangan'ny fanolanana ilay lehilahy. Vao nahita ny polisy anefa ilay mpanolana dia nirifatra nandositra tao anaty kirihatra ka raikitra ny fitadiavana azy. Minitra maromaro taty aoriana vao tratra ilay mpanolana ary nentina tany amin'ny paositry nypolisy misahana ity tranga ity hanaovana fanadihadiana.